टाउका टाउकाले कानेखुसी गरेर पार्टीमा समस्या बल्झिएको हो : शर्मा- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्दा नेताहरूको बाचा थियो– दुई वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरिसक्छौं । घोषणा र बाचाअनुसार भएको भए यतिखेर नेकपा नयाँ नेतृत्वसहित पार्टी काममा एकताबद्ध भइसक्नुपर्थ्यो तर अहिले पनि आन्तरिक भागबन्डामा कसको भूमिका के हुने भन्नेमै नेताहरूको ध्याउन्न छ ।
उदाहरणका रूपमा गत वैशाख २४ र २० गते बसेको सचिवालय बैठकको परिदृश्य मात्रै हेर्दा पनि त्यसभित्रको किचलोबारे धेरै प्रस्ट हुन सकिन्छ । नेताहरुले एकता प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा पुगेको बताए पनि पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनका लागि गुट-उपगुटबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । एकीकरण घोषणाको दुई वर्ष पुग्दा पनि किन टुंगोमा पुगेन भन्‍ने विषयमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :
पार्टी एकीकरणको मर्मअनुसार नेकपा चलेको छ ?
नेकपाको एकताका दुई मुख्य उद्देश्य थिए । पहिलो उद्देश्य कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समाजवादको दिशातिर राष्ट्रलाई लैजाने थियो भने दोस्रो उद्देश्य अस्थिरताको अन्त्य गरी राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने हो । मूलत: एकीकरणको मर्म र उद्देश्यअनुसार नै पार्टी चलेको छ तर पछिल्लो समयमा आएर उद्देश्यअनुसार पार्टी चलेकोजस्तो नदेखिनुमा नेताहरूले विधि र पद्धतिभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नु मुख्य कारण हो ।
त्यो बेलाको रातबिरातको यहाँहरूको दौडधुप अहिले सार्थक भएन उसो भए ?
आमकार्यकर्ता संस्थागत रूपमा पार्टीको विधि पद्धति, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको पक्षमा छन् । सचिवालयबाहेकका कमिटीहरू विधि र पद्धतिमै चलेका छन् । सचिवालयका नेताहरूले विधि र पद्धतिभन्दा माथि हुन खोज्नुभएको छ र देखिनुभएको छ । त्यसको समाधानका लागि हामीले बैठक पनि माग गरेका छौं । अहिले कोभिड र नीति कार्यक्रमले हाम्रो बैठक केही पर सरेको छ । सचिवालयलाई विधि पद्धतिभित्र ल्याउने र नेताहरूलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा ल्याउने चुनौती आमकार्यकर्तामा आएको छ, हामी त्यसको प्रयासमा छौं । हाम्रो दौडधुप पनि समाजवादउन्मुख समाजकै लागि हो । त्यो खेर जाँदैन । अहिले मूल नेतृत्व टिममा देखा परेको संकटले समस्या निम्त्याएको हो । हामी तल्लो तहका कार्यकर्तालाई मिलेर संकट समाधान गर्छाैं भन्ने विश्वास छ ।
त्यो बेला पार्टी महाधिवेशन दुई वर्षमा गर्ने भनिएको थियो, तर एकता प्रक्रिया पनि टुंगिएन । जुन हतारोले पार्टी एकता भएको थियो, उपलब्धि त त्यसअनुरूप भएन नि ?
नेतृत्वले समग्रमा पार्टी आन्दोलन कसरी हाँक्नुपर्छ भन्ने नसोच्दा यी समस्या निम्तिएका हुन् । हामी यी समस्या समाधान गर्ने संघर्षमै छौं । हामीले जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएपछि नेपाली आन्दोलन समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ भनेर संश्लेषण गरेका छौं । त्यही लक्ष्यमा अघि बढ्न शान्तिपूर्ण संघर्ष र प्रतिस्पर्धाको बाटो अंगाल्ने स्पष्ट गरेका छौं ।
यहाँहरूको दुई वर्ष त कसका मान्छे कति भनेर टाउको गन्दैमा बित्यो नि ?
संगठनात्मक रूपमा आइपुग्दा संख्याहरू पनि त्यहाँ हुन्छ । हामीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र औपचारिक विघटन गरेका हौं तर पार्टी विघटन भए पनि ती पार्टीका पुराना आदत, प्रभाव, संस्कारहरू थिए । ती जस्ताको तस्तै नयाँ पार्टीमा आइपुगे र गुटगत मानसिकताहरू नयाँ पार्टीमा फैलिएको देखियो । आमकार्यकर्ता एकता र रूपान्तरणको पक्षमा देखिन्छन् तर मूल नेतृत्व टिम रूपान्तरणको पक्षमा देखिँदैन । परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्नेभन्दा पनि पुरानै यादमा हराइरहेको छ । आजको मुख्य समस्या भनेको त्यही हो । पुरानो पार्टीका गुटहरू नयाँ पार्टीमा सर्नुले एकीकृत पार्टी पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबमा पुरानो आदतले नै थिचिएको छ । मूल नेतृत्वमा वैराग्य देखिएको छ, त्यसले पनि समस्यामा पारेको छ । हामी नेतृत्वको एकताप्रतिको उदासीनता र वैराग्यलाई तोडेर नेकपालाई नेकपा बनाउने अभियानमा छौं ।
तर आफैंले बनाएको विधान त पार्टीले मान्दैन नि !
नेकपा पूर्ण रूपले नेकपा भइनसक्नुको मूल कारण नै त्यही हो । पारित भएको राजनीतिक प्रतिवदेन, विधान, नियमावलीअनुरूप मूल नेतृत्व चल्दै चलेनन् । सामान्तवादविरुद्ध लामो समय संघर्ष गरेको हाम्रो नेतृत्वले अहिले नेकपामा भने सामूहिक नेतृत्वमा अरुचि देखायो । हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा सामन्तवादका बाछिटा परेको देखिन्छ तर हामीले अन्तरसंघर्षमार्फत परास्त गर्दै जानेछौं ।
तपाईंहरूले परास्त पार्नै पर्ने नेकपाको मूल कमजोरी के हो अहिले ?
समानान्तर नेतृत्व बनाउनु र स्पष्ट कार्यादेश नहुनु आफैंमा सैद्धान्तिक रूपले विरोधाभाष थियो तर त्यतिखेर हाम्रो बाध्यता पनि थियो । एकताको प्रारम्भिक चरणमा भएको सहमति इमान्दारिताका साथ लागू गर्ने या त कमिटी प्रणालीमा ल्याएर पुन: परिभाषित गर्नुपर्थ्यो । तर टाउका टाउकाले कानेखुसी गरेर निर्णय समस्या बल्झिएको हो । हामीले वैचारिक रूपले समाजवाद भनिएपछि यो कसरी अघि बढ्छ, यसको सामाजिक र आर्थिक प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्नेमा नेकपा अस्पष्ट छ । यही बेला केन्द्रमा सचिवालय भन्ने संरचना छ त्यो स्वार्थको गठजोडजस्तो देखिएको छ र सचिवालय नै पार्टीको मूल समस्या हो ।
नेकपा अबको दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
अमुक नेतृत्वका आ-आफ्ना चिन्तन र शैली त हुन्छन् नै । ती शैली पार्टीको विधि, पद्धति र प्रणालीभन्दा बाहिर हुनै सक्दैनन् । ती सबैलाई हामीले पार्टी प्रणालीभित्र ल्याउँछौं । त्यसमा मूल नेतृत्व टिम अझ गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०९:४८
संक्रमित क्षेत्रबाट आएकाबारे स्थानीय तह बेखबर
संक्रमण बढ्न थालेपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यका भित्रिने नाकामा आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ । तर, लकडाउनयता कति भित्रिए भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै पनि स्थानीय तहसँग छैन ।
जेष्ठ २, २०७७ लीला श्रेष्ठ, प्रशान्त माली, सीमा तामाङ
काठमाडौँ — बाराबाट सोमबार मोटरसाइकलमा २ जना पुरुष ललितपुरको शंखमूलस्थित ग्रिल कारखानामा आएर बसे । कपिलवस्तुबाट आएका ३ जना पनि शंखमूलमै छन् । लुकीछिपी आएको थाहा पाएपछि उनीहरुबारे स्थानीयले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्वास्थ्य परीक्षण नभएसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न आग्रह गरे ।
तर, महानगरले क्वारेन्टाइन स्थल कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीसँग सम्पर्कमा आएका र पाटन अस्पतालमा उपचार गराइरहेका संक्रमितका आफन्तलाई मात्र राख्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै राख्न मानेनन् । महानगरले वैशाख २२ मा सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा २० शय्याको क्वारेन्टाइन बनाएको थियो । मनिडोल टोल सुधार समिति शंखमूलका सचिव नारायण तण्डुकारले भने, ‘टोलबासीको हैसियतले जनप्रतिनिधिलाई बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरुको जानकारी गराएँ । तर, व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले जानकारी गराएको कुनै औचित्य रहेन ।’
उनले जनप्रतिनिधिले चासो नदिएपछि टोलबासी मिलेर घर भाडामा बस्नेहरुलाई स्थिति सामान्य नभएसम्म गाउँ फर्केकाहरुलाई पुन: फिर्ता नबोलाउन माइकिङ गरेर सचेत गराएको बताए । ‘लुकीछिपी बस्ने अन्य पनि छन्,’ उनले भने, ‘यसप्रति जनप्रतिनिधिको ध्यान जाओस् ।’ स्थानीय पृथबिन्दु महर्जनका अनुसार शंखमूलमै नेपालगन्जबाट परिवारसहित आएर बस्ने पनि छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरिएको छैन । ‘पछिल्लो समय संक्रमण बढी देखिएका तराईका जिल्लाबाट आउने धेरै छन्, यसले टोलमा संक्रमण हुने डर बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिले यस्ता व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गरी निगरानीमा राख्ने, स्वास्थ्य जाँच गराउन पहल गर्नुपर्‍यो ।’
ललितपुर महानगरका सामाजिक विकास शाखाका संयोजक दिनेश कार्कीले एन्फास्थित क्वारेन्टाइन कोभिड संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकालाई मात्र राख्न बनाइएको बताए । ‘बागडोलस्थित ज्यापू समाजको वृद्धाश्रममा बनाइएको क्वारेन्टाइन भने त्यहाँका स्थानीयले विरोध गर्दा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन,’ उनले भने ।
संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेका तराईका विभिन्न जिल्लाबाट भित्रिने मानिसको संख्या बढेसँगै उपत्यकामा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन थालेको छ । संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यका भित्रिने नाकामा बिहीबारदेखि आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ । तर, उपत्यका भित्रिसकेकाको यकिन तथ्यांक कुनै पनि स्थानीय तहसँग छैन । उपत्यका भित्रिएका मानिसको तथ्यांक संकलन, निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै भएको जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौंका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्य बताउँछन् । ‘काठमाडौं उपत्यकामा जति आएका छन्, सम्बन्धित स्थानीय तहले पहिचान गरेर परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
बाहिरी जिल्लाबाट फर्किनेको तथ्यांक संकलन गर्न प्रत्येक वडामा पत्र पठाउने तयारीमा रहेको ललितपुर महानगरका सामाजिक विकास शाखाका संयोजक कार्कीले बताए । ‘मुख्य त घरबेटीले छिर्न दिनुभएन,’ उनले भने । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले भने लुकीछिपी बस्नेहरुको वडाको पहलमा खोजी सुरु गरेको नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जनाए । ‘ कान्ति लोकपथअन्तर्गतको तीनपाने भञ्ज्याङ र लेले तिलेश्वरमा प्रहरीसँगको समन्वयमा संयुक्त हेल्प डेक्स सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिका भित्रिसकेकाहरुलाई बज्रवाराही र लेलेस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको क्यारेन्टाइनमा राखिनेछ ।’
महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि बाहिरी जिल्लाबाट आउनेलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र राख्न वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले ललितपुर छिर्ने नाका पूर्वमा लाकुरी भञ्ज्याङ, दक्षिणमा भट्टेडाँडामा कडाइ गरिसकेको दाबी गरे ।
बल्ल निगरानी बढाउँदै पालिका
भक्तपुरका चारवटै स्थानीय तहले उपत्यका बाहिरबाट आएकाहरुलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षणको रिपोर्टबिना प्रवेश निषेध गरेको छ । भक्तपुर, मध्यपुर थिमि, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाले सवै ३८ वटा वडा कार्यालयमार्फत आ–आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र लकडाउनको समय वा अघि अन्यत्र गएर आएका व्यक्तिलाई कोभिड–१९ परीक्षणको रिपोर्टबिना घरमा प्रवेश नदिन घरधनीलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
नगर क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने नागरिकको लगत संकलन तथा निगरानी बढाएको नगरप्रमुखहरुले जनाएका छन् । ‘बाहिरबाट आएकाको तथ्यांक लिने र सकेसम्म छिर्नै नदिने गरी कडाइ गरेका छौं,’ भक्तपुर नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतीले भने, ‘सरकारले खुल्न दिने भनेको ४४ वटै उद्योगधन्दा भक्तपुर नगरमा खोल्न दिँदैनौं, उपत्यकामै खोल्न नदिने गरी छलफल गर्दै छौं ।’ वडास्तरबाटै कोभिड–१९ परीक्षणलाई तीव्रता दिने, स्वास्थ्य उपचारलगायत अतिआवश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्किन नदिने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
भक्तपुरमा बसोबास गर्ने दुई जनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीय तहहरुले डेरा छोडेर गएका र लकडाउन बढेपछि र्फिता आएकाहरुमाथि निगरानी बढाएका हुन् । ‘नगर क्षेत्रभित्र आफ्नो घर वा भाडामा बस्ने व्यक्ति उपत्यकाबाहिर गएको भए फर्किआउन नदिने र आएको भए परीक्षण नगरी प्रवेश नदिन सम्बन्धित घरधनीलाई सजग गराएका छौं,’ मध्यपुर थिमि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘परीक्षण नगरी प्रवेश गराइएको पाइएमा घरधनीलाई समेत कडा कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’
मध्यपुर थिमिले उच्च सतर्कता अपनाउँदै अरनिको राजमार्ग र पुरानो सडकबाहेक अन्य सहायक सडकहरुमा सार्वजनिक अवागमन पूर्णरूपले निषेध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । नगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनलाई कडाइ गर्नुका साथै सडक, पसल पूर्णरूपमा बन्द गर्ने जनाएको हो ।
सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि उपत्यकाबाहिरबाट नगर क्षेत्रमा बस्दै आएका बाहलवाला गाउँबाट फर्किएको भए विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गरेको छ । सूर्यविनायकले खाद्यान्न, औषधि पसललगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिदबिक्रीका लागि बिहान ९ बजेसम्म मात्र खोल्न अनुमति दिएको जनाएको छ । सूर्यविनायकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीका अनुसार नगरको १० वटै वडा कार्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपत्यकाबाहिरबाट प्रवेश गरेका नागरिकको निगरानी गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कार्यको थालनी गरेको छ ।
चाँगुनारायणका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नगरले बाहिरबाट भित्रिने नागरिकलाई प्रवेश निषेध गरेको छ । प्रवेशका लागि अत्यावश्यक कामका लागि बाहिरबाट आएकाहरुले समेत स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य देखाउनुपर्नेछ । उपत्यकाबाहिरबाट आएकाहरुको निगरानी तथा लगत संकलनका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक परिचालक, विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी परिचालित हुने नगरप्रमुख मिश्रले बताए । नगरपालिकाहरुले उपत्यका भित्रिनेको तथ्यांक राख्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै नगरसँग पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कति नागरिक भित्रिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।
‘स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्छ’
उपत्यकामा प्रवेश गरिसकेकालाई घरधनी र स्थानीय तहले कोरोना परीक्षण नगरेसम्म बहिष्कार गरेर विभेद गरेको सरोकारवालाको बुझाइ छ । ‘बाहिरबाट आउनेलाई टोलवासी र घरधनीले घर पस्न दिएका छैनन् । आइसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले परीक्षण गराएर होम क्वारेन्टाइन्मा राख्न सक्नुपर्छ,’ काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक वैद्यले भने, ‘१५ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षणको नतिजाअनुसार मात्र घर पठाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्छ ।’ आउने र जाने दुवै पक्षले स्थानीय तहमा खबर गरेर मात्र आवतजावत गरेको खण्डमा यस्तो समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले सबै स्थानीय तहले बाहिरी जिल्लाबाट आएका तथा बढी भीडभाड हुने ठाउँका व्यक्ति पहिचान गरेर परीक्षण गराउनुपर्ने सुझाए । काठमाडौंका सांसद जीवन श्रेष्ठले उपत्यकामा भित्रिएका मानिसको स्थानीय तहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी को–कहाँ छन् पत्ता लगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संक्रमण देखिएपछि मात्र खोजी गर्ने प्रचलनलाई हटाउँदै उपत्यका भित्रिएकाहरुको खोजी गरी संक्रमण फैलन रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो ।’ स्थानीय तह र संघीय सरकारले समन्वय गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘स्थानीय तहले उपत्यका भित्रिएकाहरुको खोजी गर्दै उक्त ठाउँलाई सिल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उपत्यका भित्रिन अब आरटीडी रिपोर्ट अनिवार्य
बाहिरी जिल्लाबाट अतिआवश्यक कामका लागि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नुपरे अब आरडीटी रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका नगरप्रमुख तथा सुरक्षा प्रमुखहरुबीचको बैठकमा लकडाउनमा यहाँका विभिन्न नाकाबाट प्रवेश गर्ने सवारीसाधन र व्यक्तिहरूको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।
बाहिरबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना देखिएपछि गृहले नगरप्रमुखहरुको सुझावका आधारमा अतिआवश्यक काममा बाहेक उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाउने तथा आगमनको स्रोत नै रोक्ने, उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अतिआवश्यक प्रयोजनमा बाहेक पूर्णरूपमा सिल गर्ने र लुकीछिपी हुने प्रवेश पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नेे निर्णय गरेको हो ।
भविष्यमा आवश्यक भएमा क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने होटल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवनलगायतको लगत संकलन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा उपत्यका प्रवेश गरेकाहरूको खोजी, लगत संकलन, क्वारेन्टाइन र परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ,’ भक्तपुर नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतीले भने, ‘उपत्यका प्रवेश गरेका व्यक्तिको पहिचान गरी समूह–समूहमा पीसीआर परीक्षण अगाडि बढाउन पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०९:४२